Home » Creative Writing » ၀ဋ်လည်ခြင်း
ကျွန်မ ၀ဋ်လည် လေပြီလား…… သူမက ကျွန်မတို့ကို ခွဲထား လေမည်တဲ့…….
ပေါ့သေးဘူး။ မတ်လ ကုန်မှ အအေးပေါ့မှာတဲ့။
ထွန်းအိန္ဒာဗိုလ် သီချင်း ပြန်ဆိုပြလိုက်လေ
ဟုတ်ပါ့။ တခါတလေ သူကမေးသေးတယ် မေမေ မီးမီးကို ချစ်လား ပါပါကြီးနဲ့ ကိုကိုကြီးကို မချစ်ဘူး မဟုတ်လားတဲ့ သူ လိုချင်တဲ့အဖြေပါ တခါတည်း ထည့်မေးတာ။
တွေးလေ.. တွေးကြပေတော့… ပေါ့..။
သဂျီးရဲ့ ရွာက ဆွဲဆောင်မှုအား ကောင်းလို့ထင်ရဲ့ သားတော်မောင်က စာရေးမလို့တဲ့ သားကျောင်းမှာ စာဘယ်လိုသင်လည်း သားကျောင်း အကြောင်းတွေ မေမေ့ကို ပြောပြ ပါလား ဆိုတော့ ဟင့်အင်း မပြောပြဘူး သားသား ဘာသာ သားသား နာမည်နဲ့ ရေးမှာ မေမေ့လို နာရီ ရအောင်တဲ့။ တခါတလေ သူ ရေးချင်စိတ်ရှိရင် ကွန်ပြူတာထဲမှာ စာရိုက်ပြီးသိမ်းထားလေရဲ့။ သားသား ရေးပြီးရင် သားသား နာမည်နဲ့ တင်ပေးပါတဲ့ ကတိတောင်းနေလေရဲ့ သဂျီးရေ။
ရေးလို့.. သားသားကို ထိပ်ဆုံးက… အားပေးပါတယ်လို့နော…။
အခုလို.. နောက်မျိုးဆက်လေးတွေပါလာတာ.. လွန်စွာစိတ်ချမ်းသာ..။
ကိုနို လည်း သားတစ်ယောက် သမီး တစ်ယောက်ဆိုတော့ သည်လို အဖြစ်လေးတွေ မကြာမကြာ ကြုမှာပေါ့နော့
ကိုယ်ပိုင်ဆို ပိုချစ်ဖို့ကောင်းလို့ ကြိုးစားကြည့်ပါလား
ဟုတ်တယ် ဦးကြီးမိုက် အိမ်ကြီးရှင်က ပြောတ တ်တယ် သမီး အမူအရာတွေ စကားတွေက မင်းနဲ့ တပုံစံတည်းတဲ့။ အမေ ပြောတဲ့ စကားနဲ့ ပြန်တွယ်တ တ်လို့လေ။
အမ်တီမှီကို အနော် လာတွေ့ခြင်သယ်… ရမား
နေပါစေတော့ ဦးကြောင် မီးမီး ကြောက်ကြောက်။
ကလေးတွေကလည်း ချစ်စရာ. . .
ကလေးတွေနဲ့ အနုပညာလေး ဆို ရပါပြီ။ ညီမလေးတော့ ……